Blockchain Izindaba 21.05.2018 - Blockchain Izindaba
UKhomishana Philippines SEC icela abathintekayo mfihlo’ impendulo ku imithetho
IPhilippines 'emakethe Regulator, Zezibambiso and Exchange Commission, sifuna uvo mfihlo futhi blockchain “babambimsuka” ukusiza ejensi kahulumeni ekwakhiweni kweluhlaka lwetinhlelo imithetho afanele isikhala.
Commissioner SEC Ephyro Luis Amatong wakhuluma emhlanganweni Philippine Association of Digital Commerce and Industry endlalekile, futhi wathi:
"Uhulumeni ufuna ukuba mathupha ekwakheni imithetho mayelana cryptocurrency. Sifuna ukubandakanya bonke abathintekayo ngokubuza ngempendulo yakho. Asifuni ukuba zivimbele noma yini nje ngoba asiziqondi okuthile. Yingakho impendulo yakho nokubambisana wakho abaluleke kakhulu singakwazi beveza i umthetho ezifanele mayelana cryptocurrency zokuhweba. "
osopolitiki Colorado sika kungakabiphi ukwamukela iminikelo mfihlo
Isimo Colorado kungakabiphi uvumele amakomiti zezombusazwe ukwamukela iminikelo e cryptocurrency.
I eHhovisi LikaNobhala Colorado yeMibuso eshicilelwe okusebenzayo okusalungiswa entsha yalo “Imithetho Ngokuphathelene Umkhankaso Political Ezezimali” okuyinto ephawuleka kuhlanganisa isigaba esisha kwi cryptocurrency iminikelo.
Umgwaqo ohlongozwayo isiqondiso uthi:
“Ikomidi angase ukwamukela iminikelo e cryptocurrency, kuze kube umkhawulo lwamukelekile ukheshe noma uhlamvu lwemali umnikelo. Inani iminikelo ukubaluleka kwengosi kuba cryptocurrency ngesikhathi okomnikelo. Ikomidi kumele abike noma isiphi isikhalo azuze noma ukulahlekelwa emva umnikelo nezinye engenayo noma namarisidi.”
Russia & Iran uyavuma ukuthi cryptocurrencies ingasetshenziswa ukugwema SWIFT kanye unswinyo
Irans inhloko izindaba kwezomnotho, Mohammad Reza Purebrakhim, echazwe usebenzisa imali digital njengoba kusho ukubalekela ethonyeni dollar njengoba “isiqondiso ethembisa.”
Lokhu kuxoxwe ngazo emhlanganweni elekhanda WaseRussia iKomidi elibhekele Economic Yemfihlo Dmitry Mezentsev lapho bobabili Russia nase-Iran echazwe mfihlo njengabaphuma ukumiselelwa SWIFT interbank uhlelo yokukhokha, ukusetshenziswa okwakuyoholela futhi buthaka yimuphi unswinyo yemali ebekelwe amazwe, okwenza Russia ngokubambisana neNhlangano Iran kulezi izinzuzo usebenzisa mfihlo.
CoinGate ukuqalisa Bitcoin Lightning Network zokucubungula inkokhelo
Service yokukhokha processor CoinGate uqalile ukuhlola Lightning Network.
Inkampani iyethemba ukuthi ube ukukhokhelwa processor wokuqala ukwamukela LN izinkokhelo ezimweni bukhoma.
Ikomidi ukhiye e A ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 19.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 22.05.2018
May 28, 2018 ngesikhathi 1:46 PM
May 28, 2018 ngesikhathi 7:55 PM
Juni 21, 2018 ngesikhathi 8:41 PM